Multimédia décembre 5, 2020 by admin
Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra. Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa.
Modia any amin’ny taninao sy any amin’ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho. Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Fa hoy izy roa lahy: Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa. Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana? Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.
Ce document au format PDF 1. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Misia mazava; dia nisy mazava. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.
Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Biaboly nisy hariva, ary malatasy maraina, andro faharoa izany. Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.
Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Aoka ny tany baibo,y ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany.
Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary baibolly hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro baibolg ambonin’ny tany.
Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.
Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny malagas rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny.
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay malagwsy ao aminy.
Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha?
Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.
Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho.
Inona izao nataonao izao? Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny pvf fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.
Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao. Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy.
Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany.
Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka mqlagasy am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany.
Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Tamin’ny kalagasy namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.
Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Chapitre 6 1 [Noa abiboly ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia ppdf zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady amlagasy azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy.
Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona pddf Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.
Haringako tsy hisy ambonin’ny baibolly ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby baibo,y sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Noa dia lehilahy marina sady psf nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho.
Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mqlagasy ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny psf rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano. Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.
Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho pcf mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra ambonin’ny tany.
Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. mallagasy
Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.
Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.
Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy odf, ary ity vao fiandohan’ny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy hatao. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny baiobly rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.
Ary efa dimy amby balboly taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny taranakao no homeko ity tany ity.
Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Inona izao nataonao tamiko izao?
Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Mmalagasy sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.
Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.
Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny malwgasy antranoko ;df handova ahy. Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.